Ulo > Nnyemaka
Wanzhanxing ụlọ ọrụ na-enweghị nchekwa na ụlọ ọrụ Co., LTD. na-agbaso echiche nke nchebe nke nchebe na gburugburu ebe obibi, ngwaahịa niile bụ usoro gburugburu. A na-enweta teknụzụ na-ahụ maka teknụzụ na-acha odo odo na teknụzụ nke China ọdịnala, ugbu a, ugbu a teknụzụ ochie a abụrụla igwe na-emepụta ihe dị elu site na igwe ọrụ na-emepụta ihe maka ngwaahịa gị .
Nchọpụta na Nlele Nchọpụta: Ndị otu egwuregwu anyị nwere ike inye ndị dị iche na ụbọchị 7 na-enyere ndị otu aka na-enweghị isi na-enyere ndị ahịa aka ịghọta echiche ha .Nabata na ụlọ ọrụ ka ịhọrọ atụmatụ nhazi ọhụrụ dị mma maka ika gị, ị nwekwara ike inye ndị otu anyị ohere ịhazi ngwaahịa.
Industrylọ ọrụ na-enweghị atụ na-eduga na teknụzụ na-eme ihe ike, ya na igwe 8 nke igwe na-enweghị atụ, ya na Italy site na Italy 12 sentimita asatọ ruo na sentimita iri na itoolu, ha nwere ike iwepụta ọtụtụ nha na mgbakwunye nha.
Otutu nyocha dị mma: na ebe a na-eme ihe nkiri na-enweghị isi, ngwa ahịa ọ bụla site na nyocha dị mma, iji hụ na a na-eme na-adịghị mma, iji hụ na akụkụ nke Ngwaahịa dị iche iche.
Ọrụ Usoro: Anyị nwere ike ịnye ọrụ haziri ahaziri maka ika gị, omenala akara ngosi gị, na-ebukọ, na mkpado, ect.
Ndị ahịa na-ahụ maka ọrụ ndị ahịa ọkachamara: ndị ọrụ na-ahụ maka ọrụ ndị ahịa na-ahụ maka ọrụ ndị ahịa metụtara nhazi, mmepụta, wdg. You nwere ike ịkpọtụrụ anyị mgbe ọ bụla ịchọrọ.